Magnesium | Mega Planet Co., Ltd
160 mg, 100 vegetarian capsules
Item Catalog Number: 01682
Many Americans do not obtain adequate amounts of magnesium in their diets.1 Magnesium is one of the body’s most important minerals. It is required asacofactor in hundreds of enzymatic processes within cells.2 It helps maintain normal muscle and nerve function, keeps heart rhythm steady, promotes healthy cardiovascular function, supportsahealthy immune system, and keeps bones strong. Magnesium also helps maintain blood sugar and blood pressure levels already within normal range, and it is known to be involved in energy metabolism and protein synthesis.3, 4
Magnesium isamajor factor in relaxing the smooth muscles within the blood vessels, thereby reducing peripheral vascular resistance and promotingahealthy cardiovascular system.5-7 Magnesium also affects circulating levels of norepinephrine and the synthesis of serotonin and nitric oxide.8-10
Magnesium positively influences the bone mineral matrix and its ability to metabolize minerals needed for repair and rebuilding.11,12 Scientific literature documents the need forawide range of minerals, including calcium and magnesium, that are vital to maintaining strong, healthy bones.
Moreover, there is strong evidence that dietary magnesium intake and supplementation improves the metabolic profile.13-15 Magnesium has been shown to beneficially impact insulin resistance, serum lipid profiles, inflammation, endothelial function, oxidative stress and platelet aggregability.16
The typical dose of elemental magnesium is 100 to 350 mgaday. Higher doses of 300 mg to 548 mg daily have been shown to help support healthy blood pressure.17,18
အမျိုးအစားအမှတ်စဉ် - 01682
အမေရိကန် အများစုသည် ယင်းတို့ နေ့စဉ်အဟာရထဲမှ လုံလောက်သည့် Magnesium ပမာဏ မရရှိပေ။ Magnesium သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ အရေးကြီးသတ္ထုဓာတ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ယင်းအား ဆဲလ်များအတွင်းရှိ Enzyme လုပ်ငန်းရာချီအတွင်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်သူအနေနှင့် လိုအပ်ပြီး ယင်းသည် ပုံမှန် ကြွက်သားနှင့် အာရုဏ်ကြောလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကို တည်ငြိမ်စေ၍ ကျန်းမာသည့် နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကျန်းမာသည့် ခုခံအားစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေး၍ အရိုးများကို သန်မာစေသည်။ Magnesium သည် ပင်မ သွေးတွင်း သကြားနှင့် သွေးပေါင်ချိန်အဆင့်များကို သာမန် အဆင့်အတွင်း ထိန်းသိမ်းပေးပြီး စွမ်းအင် ဇီဝလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် protein ထိန်းညှိမှုအား ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Magnesium သည် မလိုအပ်သည့် နှလုံးသွေးကြောတုန့်ပြန်မှုကို လျှော့ချ၍ ကျန်းမာသည့် နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် သွေးကြောများအကြားရှိ ချောမွေ့သည့် ကြွက်သားများကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ထို့အပြင် norepinephrine လည်ပတ်မှုအဆင့်များနှင့် the synthesis of serotonin and nitric oxide ထိန်းညှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
Magnesium သည် အရိုးသတ္ထုဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးပြုသည်။ သိပ္ပံစာတမ်းများအရ calcium နှင့် Magnesium ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်ခြင်းသည် သန်မာ၍ကျန်းမာသည့် အရိုးများ ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လိုအပ်သည်။
ထို့အပြင် Magnesium ဖြည့်စွက်မှုကြောင့် ဇီဝ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးတက်စေသည်။ Magnesium သည် insulin resistance, serum lipid profiles, inflammation, endothelial function, oxidatives stress and platelet aggregability တို့အပေါ် ကောင်းကျိုးများစွာပြုကြောင်း သက်သေပြပြီးဖြစ်သည်။
Magnesium အား တစ်နေ့လျှင် 100-350 mg မှီဝဲရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ 300-548 mg အထိ တိုးမြှင့် ဖြည့်စွက်မှုသည် ကျန်းမာသည့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ရရှိစေသည်။
အရွယ်ပမာဏ - သတ်သတ်လွတ် ဆေးတောင့် (၁)တောင့်
အခြားပါဝင်မှုများ : vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, silica.
သတိပြုရန် : မြင့်မားစွာမှီဝဲလျှင် Magnesium သည် ဝမ်းမီးအားပေးသည် သဘောရှိပြီး ယင်းသို့ဖြစ်ပွားလျှင် ဆေးခွဲသောက်ရန်၊ လျှော့သောက်ရန်နှင့် မှီဝဲမှု ရပ်ဆိုင်းထားရန် လိုအပ်မည်။